Vazhinji, vachigadzirira zuva, vanokanganwa pamusoro pemitemo yepakutanga yekuigadzirira uye maitiro pairi. 21st century, zvinoita sekunge - ndeapi mirawo, asi kune vasikana vakati wandei vanoda - vakashambidzika-vakanaka, vane tsika dzakanaka uye vakangwara varume. Usati waramba uye kuti haudi, zvibvunze mubvunzo - uri murume here? mukomana? kana murume? uye funga nezve mutsauko iwe pachako!
Maruva pazuva rekutanga - anodikanwa kana kwete?
Izvi zvinosarudzika pazuva rekutanga. Semuenzaniso, kana ikasashanda mushe, musikana achazongonyara nemaruva kubva kumurume uyo asiriye anokwezva kwaari. Iko tsika yekupa maruva kune avo vanokufarira, vaunotogarisana navo.
Imwe zano, kana zuva rekutanga rikafamba mushe, saka unogona kupa chiratidzo chinonakidza, muchimiro chemaruva emaruva, rinotevera zuva, kunyanya mangwanani. Iwe unogona kunama katsamba pairi uye nyora kuti manheru anga akanaka, kuti munguva pfupi iwe unotarisira kumuona zvakare uye kumufonera manheru. Zvirinani kushandisa dhirivhari yekutumira uye kutumira maruva nekambani. Musikana uyu anofara kwazvo nechiitiko chakadai, uye achapedza zuva rese achitarisira kushevedza kwako kwemanheru.
Shave, kusuka, uye kunhuhwirira kwakanaka ndiyo hwaro hwekubudirira kufambidzana.
Pazuva rakakosha iri, unongofanirwa kunge uine mweya wakanaka, mbatya dzakachena, zvinogara zvichinhuwirira, zvakachena uye zvipikiri zvakachena. Saka iwe unogona kuzviratidza pachako nemusikana asina kujairika musikana.
Usambofa wakanonoka - vasikana havazvifarire
Mhedzisiro yese yezuva rako inoenderana nazvo. Usaite kuti musikana amirire! Kana ukamutora, usakurumidza kuuya. Anogona kunge asati agadzirira - ipapo uchafanirwa kumirira, uye anotya uye nekukurumidza.
Ukangomuona, muudze kuti akanaka sei. Ndiudze kuti rokwe rinosimbisa sei chimiro chake uye neruvara rweziso. Maitiro ebvudzi iri anomukodzera uye kuti akanaka / anoshamisa, nezvimwe.
Mushure mezvose, vasikana vanonetsekana kwazvo pazuva rekutanga nezvehembe yavo, chitarisiko, uye kana mukomana aifarira chipfeko chake. Kunyangwe zvakapusa kurumbidza achabvisa kusahadzika kwake kwese nezvechitarisiko chake, iye achakwanisa kuzorora uye manheru achave akanaka.
Iva munyoro chaiye
Usakanganwa kumurega aende kumberi, bata magonhi, uve nehunhu. Kana iwe uri mumotokari, vhura musuwo kwaari, uye chete ipapo pinda iwe pachako. Vasikana vanofarira kuve vakanaka kwavari.
Inzwa zvaataura uye bvunza mibvunzo
Zvese zvaanotaura zvakakosha kwaari. Iye anofara kwazvo kana ukamuteerera, bvunza mibvunzo yakati wandei, uchiratidza kufarira kwako nyaya yake.
Usataure nezvezvinhu zvisina kunaka
Iwe haufanire kukurukura zvisingafadzi zvinhu nemusikana wako. Usataure nezve zviitiko zvako muhudiki hwako, nezve vakapindwa muropa nezvinodhaka zvehama dzako. Usaseka vanhu kana kukurukura navo. Rangarira, kuzvisimbisa iwe uchikanganisa vamwe, makuhwa, kuwedzeredza kwezvakanaka zvako, iyi yakaipa fomu.
"Kukwira" kwakadaro chete nemusikana ari pachena akapusa kana musikana anofarira mari yako, uye kwete muhukama. Uye makuhwa pamusoro pevamwe inyaya yakaparadzana - ichi chiitiko chevasikana uye kwete varume, ivo vanoteerera zvakadaro, uye ichi chakajeka chinobvisa uye hachisi chekuwedzera mukomana!
Ndiani achabhadhara mabhiri?
Kana mari ichibvumidza, saka zviite. Iyi fomu yakanaka kwazvo. Kana iye achida kupatsanura huwandu hwacho nepakati, murambe zvine mutsigo. Iye pasina mubvunzo achaonga chiito chako.
Iyi nyaya inofanirwa kugadziriswa zvichibva pakukwezva pakati pemukomana nemusikana. Zuva racho rakaenda nekurova, uye musikana wacho haadi kuenda kumba nekukurumidza? Uku kuchave kutsvoda kwekutanga uye kusingakanganwike kwenguva yakareba.
Kufona here kana kusafona?
Zvakare, tonga kuti zuva racho rakafamba sei. Usati wafona, funga nezvezvaunotaura. Taura nezwi rakanyatsodzidziswa, rine chivimbo. Hausi kutaura nemudzidzisi kunetseka.
Nhoroondo yekuzvibata kubva pamazuva ekare kusvika nhasi
Basic mitemo yekuremekedza uye hunhu
Zuva rekutanga rakakwana rinofanira kupera sei?
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,479 masekondi.